Kooxda Jwxo-shiil, oo Bililiqaysanaysa Qalab ay Jwxo Lahayd, Jaad Ruug Dartii – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil, oo Bililiqaysanaysa Qalab ay Jwxo Lahayd, Jaad Ruug Dartii
Jan 16, 2010 Jwxo, Jwxo-shiil, kooxda
Warar xog ogaal ah oo naga soo gaadhaya Afrikada Bari, ayaa waxay sugayaan in xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, ay ganacsato reer Kenya ah ka iibisadeen Toroyayaal [Thurryas] ay leedahay Jwxo.
Tan iyo intii ay kooxda Jwxo-shiil, dishay N/hure Dr. Maxamed Sirad Dolal oo ahaa rooxaantii waday halganka Somalida Ogadeeniya ee ay horseedka ka ahayd Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. Waxaa uu wiiqan xoog leh soo gaadhay halganka ay waday ONLF,waxaana uu midba meel aaday ciidankii awooda badnaa ee uu lahaa ururka ONLF.
Kooxda Jwxo-shiil, o aan ilaa iyo hada sheegin sababta ku kaliftay in ay dilaan halgame Dr. Dolal, ayaa waxaa loo malaynayaa in ay wadteen heshiis hoose oo ay la lahaaeen xukumada Ma Lise, balse markii ay dileen Dr. Dolal, lagu laaday wax walba oo loo balan qaaday.
Waxaana muddo dheerba si habqan ah u soo gaadhayey dalalka Afrikada Bari siiba dalka Kenya, masuuliyiin ku sheeg u Jwxo-shiil, u adegsaday duminta halganka ururka ONLF. Ragan oo hore ay xasaskooda u bili jireen Jaaliyaadka dibadu ayaa haatan ku soo dhacay meel cidla ah. Waxay xubnahani mudo dheer ka qaraafayeen muwaadiniinta reer Ogadeeniya iyaga oo isaga dhigaya dad halganka daacad u ah, Eheladooda dibadaha joogtaana way ka daashay tuugmadooda taagan ee aan dhamaan.
Sheekh Deeq oo loo malaynayo in ay dishay kooxda Jwxo-shiil mooyee dhamaan intoodii kale waxay joogaan dalka Kenya iyo qaar yar oo jooga dalka Jabuuti. Xubnahani waxay xaalufiyen Jaaliyaada inteeda aan ka warhaynin, Jwxo-shiil, oo awal hore beeshiisa qaaraanka uu ka qaado wax uga tuuri jiryna, isaga ayaaba haatan ku dabran dalka Eritrea oo dayman badan ku leh.
Hadaba, sida aanu wararka ku helayno waxay xubnahani ka iibsadeen qalabkii Jabhada ganacsato reer Kenya ah, qalabka la xaqiijiyey in la iibiyey ayaa waxaa ka mid ah 5 Torooya [Thurraya sitelite communication system], waxaana iibsaday qalabkan rag ay ka mid yihiin Cali Dheere, Maxamed Shariif iyo gacan ku dhiigle Cabdiramaan Daa,uus.
Qalabkan ayey ku gateen qiimo lacageed oo gaadhaya US$700, oo u dhiganta 503,887.30 Kenya Shillings. Qalabka ay Jabhadu leedahay waxaa iska leh Jwxo oo matasha dawladnimada ummada Somalida Ogadeeniya, cid alaale cidii si xun uga faa,iidaysatana waxay ku ahaan doontaa dambi.
Waxaana muhiim ah in ruux alaale ruuxii ka tagaya Jwxo, in uusan u malaynin in uu leeyahay qalabka Jabhada ee uu gacanta ku hayo, waana in uu ku wareejiyo xubnaha Jwxo ee iyagu shaqada ku jira.
Waxaa hore iyana lacago samofal ah oo laga soo kala uruuriyey dalalka reer galbeedka, loona diray hayad samafal ah oo magaceeda la yidhaado Africa Concern oo ka shaqaysa xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ka dhacay lacag xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, lacagtaas oo ahayd ilaa iyo US$20,000. Xubnaha lacagaha Hayyada dhacay waxaa ka mid Tibaa iyo nin la yidhaahdo Ina Shafeec oo uu Qaaxo Abti u yahay.
Nin walboow abaalkaa wuu ku sugi ummada Somalida Ogadeeniyana kuma mooga wax tar iyo waxyeelo.
Cabdiraxmaan Maadey oo u Goodiyey Gabadha Dr. Maxamed Siraad Dolal!
Tiirkii Halganka Umada Somalida Ogadeeniya Dr. Dolal, Januray 17, 2009